15/05/2018 admintriatra 0
Samy sarotiny amin’ny hitohizan’ny fampandrosoana avokoa ny rehetra amin’izao fotoana izao, ary tsy misy miantso afa-tsy ny filaminan’ny firenena. Satria tokoa samy tompon’andraikitra eto amin’ ny firenena dia samy hotsarain’ ny tantara avokoa, ka ny …Tohiny
PPN : Marin-toerana ny vidiny
Azo ambara ho marin-toerana amin’ny ankapobeny ny vidin’ny PPN amin’izao fotoana, raha ny vidin-javatra teny Anosibe omaly no asian-teny. 2 300 Ar ohatra ny iray kilao amin’ny siramamy raha 2 600 Ar izany nandritra ny …Tohiny
Ady amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana : Lehilahy mpanamboatra basy saron’ny zandary
Mitohy hatrany ny ezaka hatao hiadiana amin’ny fiparitahan’ny fitaovam-piadiana eo anivon’ny zandarimariam-pirenena. Lehilahy iray, izay voalaza fa mpanamboatra basy no voasambotr’izy ireo tao an-tranony, tany amin’ny fokontany Vohimasina, kaominina ambanivohitr’i Belobaka ny sabotsy lasa teo …Tohiny
Andohatapenaka : Roavavy mpanao menaka lavanila hosoka tra-tehaka
Notanana am-ponja vonjimaika noho ny resaka fisolokiana avo lenta amin’ny fivarotana menaka lavanila hosoka ny roavavy voasarigotra ho tompon’antoka tamin’izany, taorian’ny fakana am-bavany azy ireo teny amin’ny tribonaly Anosy. Omaly araka izany no natolotra ny …Tohiny